कृष्ण र रुपाको प्रेम …वास्तवमै मुना मुनामदन ! शेयर गरिदिनुस «
कृष्ण र रुपाको प्रेम …वास्तवमै मुना मुनामदन ! शेयर गरिदिनुस
प्रकाशित मिति : 30 June, 2019 12:24 pm
असार। २ अक्षरको ‘माया’ शब्द मै कति मिठास र कति आनन्दित छ । यही मात्र २ अक्षरले बनेको शब्द ‘माया’ जुन सुन्नमा जति सरल छ उति नै गहिराइ पनि छ, जो असली प्रेमीहरूका लागी। यस्तै निस्स्वार्थ माया र अमर प्रेम कहानी कुनै बेला हामीले पढेका थियौ ‘मुनामदन’ ।
आज त्यस्तै वास्विक प्रेम कहानी हामी देखिरहेका छौ ‘कृष्ण वली र रूपा मगर’को । मुनामदन एक काल्पनिक प्रेमीहरूको प्रेम कहानी भएतापनी यथार्थमा उनीहरू भन्दा “कृष्ण र रुपा”को अति उच्च रहेको छ । रूपा वलीले वास्तवमै मुनाको जस्तो भूमिका निर्वाह गरेर देखाइन् ।
चिया पिएर कुराकानी सुरु गर्दा, कृष्णले आफ्ना सबै कथा सुनाए । उनले कसरी गुमाए त दुई हात र एक खुट्टा ? कृष्णकी श्रीमती अन्तर्वार्तामै रुदा मैले पनि आफुलाई सम्हाल्नै सकिन, आंशु आंखाको डिलसम्म आयो । कस्तो पिडा, पहिला बाबाले छोडे पछि आमाले । सानैदेखि मामाघरको हजुरआमाले हुर्काए, कृष्णलाई ।
जब ठुलो भए यस्तो घटना घट्यो । प्रेम गरेपछि अन्तरजातिय बिवाह गरेका रुपा र कृष्णको प्रेम कथा पनि मेरै फिल्मको सुटिंगबाट सुरु भएको रहेछ । हामी तपाईको बिर्खेलाई चिन्छस् फिल्मको सुटिंग हेर्न जांदा पहिलो पटक कुराकानी गरेको नि, रुपाले सुनाईन् ।
कृष्णको हात र खुट्टै काट्नु पर्ने घटना के थियो ? किन सानैमा छोडेका थिए, कृष्णलाई उनका बाबु आमाले ? कसरी सम्भव भयो, कृष्ण र रुपाको अन्तरजातिय बिवाह ? अनि समाजले किन भन्दैछ रुपालाई, कृष्णलाई छोड्दे । साँच्चीकै कृष्ण र राधाको जोडी थियो। कति अपार अनि निस्वार्थ र चोखो माया गरेकी छिन् माया मगरले कृष्णलाई, माया होस्त यिनको जस्तो।
धेरै कुरा सिकेको छु यिनीहरू बाट। कस्सम सम्झिदा मन भक्कानिन्छ आँखा रसाउछ। हिरो बन्न चाहन्थे तर के गर्नु ? फिल्मको सुटिंगमै भेटेर गरेका थिए, अन्तरजातिय बिवाह । बुढीलाइ MBBS पढाउने सपना थियो। -नेपाली इन्साईडरबाट